आज फेरि सुनको मूल्य बढ्यो, कतिमा हुदैँछ नेपाली बजारमा काराेबार — Imandarmedia.com
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा बुधबार पनि सुनको मूल्य वृद्धि भएको छ । मंगलबार तोलामा ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन बुधबार बढेर तोलामा ९२ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार तेजावी सुन तोलामा ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसैबीच बुधबार चाँदीको मूल्य पनि सामान्य वृद्धि भएको छ । मंगलबार तोलामा १२४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य बुधबार बढेर तोलामा १२६० रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ ।
यस्तै माघ ६ गते मंगलबार सुन र चाँदीको मूल्य बढेको थियाे । सोमबार तोलामा ९१ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन मंगलबार बढेर तोलामा ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार तेजावी सुन तोलामा ९१ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि सोमबारको तुलनामा मंगलबार बढेको हो । सोमबार तोलामा १२३० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी मंगलबार बढेर तोलामा १२४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत मात्र रहने भएको छ । कोभिड १९ महामारीबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।
यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको हो । आयोगले यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ, तर सार्वजनिक भने गरेको छैन । तर, अध्ययन प्रतिवेदनसमेत समावेश गरी आयोगले तयार पारेको वाषिर्क प्रतिवेदनमा भने अध्ययनको सारांश राखिएको छ ।
उक्त सारांशले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर शून्यमा झर्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदन अनुसार २०७६/७७ को कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत मात्र रहने छ । कोभिड-१९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्न २०७६ चैत ११ देखि २०७७ जेठसम्म अवलम्बन गरिएको पूर्ण बन्दाबन्दी र २०७७ असारमा आंशिक आर्थिक गतिविधि खुकुलो पारिएको थियो ।
त्यसका आधारमा आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो संकुचन देखिएको हो । यसअघि आयोग मातहतकै केन्दि्रय तथ्यांक विभागले सो आवमा २.२७ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको थियो ।
विभागको अनुमानभन्दा पनि अर्थतन्त्रमा अझ ठूलो खाडल परेको आयोगको प्रतिवेदनले पुष्टी गरेको छ । आयोगका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्र २.६ प्रतिशतले विस्तार हुनेछ । गैरकृषि क्षेत्रमा भने ०.२ प्रतिशतको संकुचन देखिएको छ । यसले समग्र वृद्धिदर समेत १ भन्दा तल झरेको हो ।
४० अंकले बढ्यो शेयर बजार, सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक
आज बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुदैँछ नेपाली बजारमा कारोबार ?
घट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा भईरहेको छ कारोबार ?
हात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
नेपाली बजार फेरि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
१५ चैतदेखि त्रिभुवन विमानस्थल दैनिक १८ घण्टा मात्र खुल्ने